3 Solar Beginner Checklist Items for Small Solar Installers - Kimroy Bailey Group
Lisitry ny lisitr'ireo tarika fandaharam-pokotan'ny taratra 3 ho an'ny taratra kely
Rehefa nanomboka ny orinasan-jolomainty tany Kimroy Bailey Renewables aho dia te-hanana lisitra izay tokony hatao any am-piandohana. Nanoratra ity lahatsoratra ity aho ary namorona ny Mazava ho azy fa ny Step by Step Solar dia hanampy ireo mpandray anjara solar afaka hanainga amin'ny tongotra ankavanana. Misy singa 3 takelaka fanatanjahantena manomboka amin'ny masoandro izay tokony ho napetraka amin'ny toeran'ny masoandro kely, dia fiofanana ara-dalàna, fitaovana sahaza ary ekipa kely.
Aza hadino ny mampiseho ny rafi-jironao amin'ny masoandro amin'ny vahiny any amin'ny barbeque anao
Lista fanamarihana momba ny tara-masoandro # 1: Fiofanana tsara ho an'ny installer sur Solar
Rehefa namorona ny atiny an-tserasera izahay Dingana nataon'i Step Solar Fametrahana, te-hanolotra horonantsary fiofanana momba ny hazavana azo avy amin'ny masoandro izahay amin'ny toerana iray. Ny sandan'ny lanjan'ny dingana fampiofanana momba ny fametrahana an'i Solar dia mandeha mahitsy - nesorinay ny fizotran'ny fisedrana sy ny fahadisoana lafo vidy ary narahina haingana ny ampahany mahafinaritra amin'ny fametrahana ny rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro. Ny fiofanana dia ahafahanao manangona ny vidiny sy ny fotoana, manatsara ny fahombiazanao sy ny lazanao.
Ny fanazaran-tena amin'ny sehatra toa ny fenitra fiarovana, ny sivana sy ny fametrahana ny rafitra amin'ny masoandro, ny fifampidinihan'ny mpanjifa sy ny fitsidihan'ny tranokala dia afaka mampiavaka anao amin'ny tsena. Ohatra, fantatrao fa voararan'ny lalàna ny fitafy zavatra metaly amin'ny vatanao, toy ny peratra na rojo rehefa mametraka na mihazona bateria fitehirizana. Inona ny loza mety hianaranao? Ny jiro tokana iray avy amin'ny terminal bateria izay mampifandray ireo firavaka dia toa ny mandray barazy ary mampihatra izany mivantana amin'ny firavakao.
Lista fanamarihana ny fiandohan'ny masoandro # 2: Fitaovana tsara araka ny tokony ho izy mba hametrahana haingana ny sela tontolon'ny solar panel
Raha vao nanomboka ny fametrahana takelaka solar aho tsy misy fitaovana mety dia fametrahana 3 andro haingana dia lasa asa 1 herinandro. Niteraka fandaniana betsaka kokoa tamin'ny ekipan'ny mpiasa izany ary indroa mihoatra ny dia, ka ny vidin'ny tsy fananana fitaovana avy amin'ny masoandro araka ny tokony ho izy dia nanomboka niampy haingana. Ao amin'ny dingana ataontsika amin'ny dingana vita amin'ny fametrahana ny Solar Solar, dia mampianatra anao momba ireo fitaovana sy fitaovana hanamora ny fizotranao izahay! Ireo dia fitaovana izay hampiasanao tsy tapaka amin'ny ankamaroany raha tsy ny toerana fiasan'ny masoandro rehetra. Ohatra, ny fahalalana ny fomba hamaritahana ny angon-drakitra avy amin'ny fitaovana toy ny Hydrometer, izay ampiasaina amin'ny fitsapana ny toetran'ny batteranao, dia fahaiza-manao ilaina hianarana azy. Tena ilaina ny Drills mahery rehefa miatrika tafo mivaingana sarotra, raha toa ka harabesina ny fiarovana. tena ilaina rehefa manao fametrahana rooftop.
Kitiho raha hitaky ny 54% Dingana amin'ny alàlan'ny Step Solar Course Discount ianao
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa amin'ny fanombohan'ny masoandro ny sasany amin'ireo mpanjifanao dia mety manangana trano vaovao izay mety tsy mifandray amin'ny vata fampiasa, dia manofa trano mpamokatra ianao mba hanafaingana ny fametrahana. Raha tsy misy mpamokatra portable dia tsy hanana herinaratra ho an'ny drill cordes ianao, tsofa ary fitaovana hafa. Raha malina toa izany dia azonao atao ny mandinika ny aretin'andoha amin'ny fametrahana takelaka solar amin'ny rindrina mivaingana tsy misy herinaratra. Ary aleo milaza fa proaktif ianao ary manana drôna mahery vaika ianao. Tena tsy ampoizina ny hanananao herinaratra ampy ahafahana mamakotra ny fametrahana ny masoandro manontolo tsy mila mandefa kitapom-batana ho an'ny drillinao raha miasa ianao.
Lista fanamarihana momba ny masoandro # 3: hanana tarika ekipa na tarika ekipa
Na dia manan-danja aza ny hery mety dia mila ekipa mampiasa ireo fitaovana ireo ianao ary hanampy anao amin'ny fanentanana ireo singa amin'ny masoandro. Azonao alaina sary an-tsaina ve ny mampiditra takelaka solar 6ft, 45 lb eny ambony tafo mankany an-tampon-trano! Manantitrantitra ny dingana ataontsika amin'ny dingana vita amin'ny dingana fametrahana ny Solar Solar fa ilaina ny miasa tsiroaroa. Mety hieritreritra ianao fa manelingelina ny fiaraha-miasa fa ny tena mpiara-miasa dia natao ho an'ny fiarovana sy fahombiazanao miaraka. Ny ekipa mahay miasa tsara dia manan-danja toy ny installer tsara mpaterina masoandro. Ny fiofanana ny mpiara-miasa no miantoka anao tsy mila mikorisa amin'ny dingana rehetra, na mila manamboatra asa ratsy satria nanome fahaleovan-tena ny mpiara-miasa aminao. Ny fomba tsotra indrindra hanesorana ny fiofanana amin'ny tananao dia ny fisoratana anarana ao amin'ny ekipanao ao amin'ny Dingana nataon'i Solar Solar Lalam-piofanana momba ny fametrahana tontonana ary avelao anay ny antsipiriany.
Famaranana amin'ny lisitra fanombohan'ny masoandro
Na dia tsy izany aza no sehatra tokony hoheverina rehefa manomboka ny orinasan'ny fametrahana ny masoandro dia ity no fitenin'ny fo mahomby amin'ny fampitomboana ny orinasanao solar. Ity dia tsara intuitive sy mahitsy. Mila mihetsika finday ianao rehefa mifindra amin'ny tranokala asa, fitaovam-pitaterana, manolotra asa any amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa sns.
28Oct Oktobra 28, 2016
Solika ambanivohitra ho an'ny orinasa madinika mba hisorohana ny fahatapahan'ny herinaratra
Azonao an-tsaina ve ny andro sy sasany tsy misy herinaratra? Eto an-tanàna ambanivohitra misy antsika dia be ... hamaky bebe kokoa
23Jun Jona 23, 2013
Planevana ho an'ny tambajotran'i Jamaika
Ny antenaina amin'ny fanitarana ny Lakandranon'i Panamà dia ny famerenana indray ireo andian-tsambo mega amin'ny alàlan'ny fo ... hamaky bebe kokoa
10Jun Jona 10, 2016
Ny tobin'ny Robotics KB fanavaozana 2016
Kimroy Bailey nohavaozina Robotics Summer Camp Flyer 2016 Kimroy Bailey Robotics sy ny University of Technology, i Jamaica dia niara-niasa tamin'ny ... hamaky bebe kokoa
08Jan Janoary 8, 2015
Kimroy Bailey Robotics 14 Tena zava-dehibe indrindra tamin'ny 2014
Tsara ny taona 2014! Manidina tokoa ny fotoana. Ny taona niorenan'ny Kimroy Bailey Foundation ny rivotra fiasany voalohany ... hamaky bebe kokoa
Paikady fametrahana solar installer ho an'ireo vao manomboka
Noho izany dia manana hevitra lehibe ianao amin'ny fanaovana vola matotra amin'ny indostrian'ny masoandro mpitrandraka an'arivony tapitrisa dolara fa ianao ... hamaky bebe kokoa
30Jul Jolay 30, 2014
Kimroy Bailey Robotics Camp Clemony Ceremony tamin'ny 15 Sary
Ny Kimroy Bailey Robotics sy ny Camp Summer Energy Camp dia nifarana tamin'ny lanonana famaranana lehibe tao amin'ny Oniversiten'i ... hamaky bebe kokoa